Jery taratra… herinandro : mifanohitra ny faniriana sy ny iainana | NewsMada
Fito taona ny “Alatsinainy mainty“, nisian’ny fandrobana tamin’ireo tanàn-dehibe. Nilaza ny filoha teo aloha, Ravalomanana, fa tsy manenjika ireo nandroba ny fananany tamin’izany, izay lasibatra manokana. Takiny ny hamerenana ny fananany sy hanonerana ny fahavoazany. Tsy mbola fantatra izay tena atidohaben’iny raharaha iny.
Mitaky ny fanadihadiana sy famerenana ny fifidianana loholona ny kandidà MMM, Marina, Monima, Mapar, Tim. Eo koa ny valin’ny fitorian’izy ireo. Hanitsakitsaka lalàmpanorenana indray ve ny mpitondra? Mbola hitohy ny hosoka sy hala-bato, raha avela amin’izao… Tsy araka ny teny etsy sy eroa ny tena zava-nisy?
Takin’ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha sy ny Sendikàn’ny mpandraharaha ny fonja ny fanalana ny talen’ny fandraharahana sy fitantanam-bola eo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana noho ny fanodinkodinam-bola. Takin’izy ireo hatrany ny fampitoviana ny fitantanana ny mpiasa eo amin’ny lafiny sosialy eo anivon’ny minisitera.
Nilaza ny ambasadaoron’i Etazonia fa tsy miova ny kolikoly eto Madagasikara: tsy misy ny fisamborana ireo “trondro vaventy” amin’ny “Raharaha andramena“, mila ezaka ny Bianco…. 28/100 ny isa azon’i Madagasikara amin’ny tsy fisian’ny kolikoly; faha-123 amin’ny firenena 168, raha ny fanadihadian’ny Transparency International.
Nilaza ny filoham-pirenena fa niainga tamin’ny fifidianana kaominaly ny vokatry ny fifidianana loholona, raha maro anisa ny HVM. Loholon’i Madagasikara izy ireo, fa tsy loholon’ny HVM. Faniriana ihany izay sa tena izay no hitranga?
Mby aiza ny fiainam-bahoaka? Tratran’ny tondra-drano ny any amin’ny faritra avaratry ny Nosy: enina ny maty, analina ireo traboina, anjatony maro ireo trano rava… Haintany sy kere fa tsy hoe tsy fahampian-tsakafo fotsiny ny any amin’ny faritra atsimo. Mbola misy fifanoherana be ny faniriana sy ny zava-misy.